जनताको लागि जोखिम मोलेर आउँदैछन् विमल गुरुङ : कानूनी, राजनैतिक र कुटनीतिकरूपले तयारी भइसेपछि नै जनतालाई भेट्न विमल गुरुङ आइरहेका हुन्-बजगाईँ - खबरम्यागजिन
Homeखबरदार्जीलिङजनताको लागि जोखिम मोलेर आउँदैछन् विमल गुरुङ : कानूनी, राजनैतिक र कुटनीतिकरूपले तयारी भइसेपछि नै जनतालाई भेट्न विमल गुरुङ आइरहेका हुन्-बजगाईँ
April 4, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि दार्जीलिङ 0
‘हामीले धेरै सल्लाह विमर्शपछि विमल गुरुङहरूलाई पहाड ल्याएका हौं। पार्टी र अध्यक्षले अब सबै जोखिम मोलेका छन्,’ बजगाईँले भने, ‘कानूनी, राजनैतिक र कुटनीतिकरूपले तयारी भइसेपछि नै जनतालाई भेट्न विमल गुरुङ आइरहेका हुन्। विमल गुरुङहरू जनता र मुद्दा कै लागि आन्दोलनमा गए, जनता र मुद्दा कै कारण भूमिगत बने र जनता र मुद्दा कै लागि सारा जोखिम मोलेर आफ्नो माटोमा फर्किरहेका हुन्। उनलाई जनता र मुद्दाले नै बचाउनेछ।’
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङ सारा जोखिम मोलेर पहाड आइरहेको मोर्चा प्रवक्ता बीपी बजगाईँले जनाएका छन्। ‘हिजो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनसभामा पहाडबाट जुन जन समुद्र उर्लियो, यसले पक्कै पनि विनय समूह र ममता समूह निराश हुनै सक्छन्, घाइते हुनै सक्छन्’ बजगाईँले भने, ‘हतास, निराश र घाइतेले जुनसुकै हतियार प्रयोग गर्नै सक्छ। हिंसा र असान्ति गर्नैसक्छ। तर हामी मुद्दा र जनताको सपना जोगाउन जुनसुकै परिस्थितिसित पनि सामना गर्न मानसिक, बौद्धिक र कानूनीरूपमा तयार छौं।’
हिजो दिनभरि विमल गुरुङहरू पहाड आउने खबर छायो। खबरम्यागजिनले सूत्रमार्फत थाहा पाएअनुसार सर्वोच्च न्यायालयका अधिवक्ता एवं कानूनविद्हरूको परामर्श र सुझावअनुसार नै विमल गुरुङहरू पहाड चढिरहेका हुन्।
विमल गुरुङ पहाड चढ्ने खबर पाएपछि पहाडका जनतामा उत्साह फैलिएको छ। विनय खेमा भने हतास बनेको छ। अहिले यस्तो कुनै ठाउँ छैन जहाँ विमल गुरुङ पहाड चढ्ने खबरबारे चर्चा नहोस्। हिजो मात्र विनय तामाङले विमल गुरुङ पहाड चढे ‘अशान्ति हुने’ आशय प्रकट गरेका थिए। यद्धपि विमल गुरुङ पक्ष र उनीहरूसित सम्बन्धित कानूनविद्हरूले नितान्तै नजिकबाट पहाडमा अशान्ति गर्नेहरूबारे ‘वाच’ गरिरहेको सूत्रले जनाएको छ।
वास्तवमा ‘अशान्ति’ विमलपक्षले गर्ने होकि विनयपक्षले? यसको तथ्य सङ्ग्रह गर्ने एउटा समूह सक्रिय रहेको बताइएको छ। जुन तथ्य पछि कानूनी लडाईँको निम्ति सञ्जीवनी बुट्टीसरह बन्ने विमल पक्षका कानूनविद्हरूको ठहर छ।
विमल गुरुङ पहाड चढ्ने भएपछि विनय तामाङ खेमा हतप्रभ बनेको छ। यता पुलिस प्रशासन पनि चनाखो बनेको छ। विमल गुरुङको यो अचानकको निर्णयले पहाडको राजनैतिक परिवेश नै परिवर्तित बनेको छ।
आज बागडोगरामा छुट्टै राज्य पन्थी र गणतन्त्रको पक्षमा उभिनेहरूलाई विमल गुरुङहरूको स्वागतमा मोर्चाले बोलाएको छ। खबरम्यागजिने पाएको खबरअनुसार ठाउँठाउँमा विमल समर्थकहरूलाई रोक्ने विनय पक्षका समर्थकहरू र पुलिस सक्रिय बनेको छ। हरेक ठाउँमा विमल गुरुङको आगमनपछि विनय समूह र पुलिस प्रशासनद्वारा दिइन सक्ने मानसिक र शारिरिक यन्त्रणाहरूको रेकर्ड राख्ने र पहाडमा अशान्ति गर्नेहरूको सारा तथ्यहरू सङ्ग्रह गरेर न्यायालयमा बुझाउने टोलीले काम गरिरहेको पनि सूत्रले जनाएको छ।
विमल गुरुङ समूहले स्वागतमा आउनेहरूलाई गणतान्त्रिक र शान्त व्यावहार गरिदिने अपील गरेको छ। मानिसहरू पुलिसको पक्राउ अनि विनय समूहको दवाबको कारण स्वागतमा उत्रने सम्भावना कम देखिए पनि भाजपा र गोरामुमोको झण्डामा स्वागतमा अहिलेसम्म चुपचापसित विमल गुरुङलाई पर्खिनेहरूको भीड देखा पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ।
बजगाईँअनुसार विमल गुरुङहरूले सर्वोच्च न्यायालयको निर्देशलाई सम्मान गर्दै चारदिनभित्रमा उच्च न्यायालयमा अग्रिम जमानतको लागि याचिका दर्ता गर्न आएका हुन्। याचिकाको ड्राफ्ट बनिसकेको छ। विमल गुरुङहरूले पहाड आइपुग्साथ वकालतनामामा हस्ताक्षर गर्नेछन्। त्यसपछि कि त कोलकाता उच्च न्यायालय कि त जलपाइगढीको सर्किट बेञ्चमा याचिका दर्ता गर्नेछन्।
विमल गुरुङ असुरक्षित हुँदैनन्? भन्ने प्रश्नको उतरमा बजगाईँले भने, ‘उनी आफ्नै पार्टीका गद्दार र तृणमूलका पेरोल कर्मचारीहरूबाहेक कसैसित असुरक्षित छैनन्। विमल गुरुङ कानूनलाई सम्मान गरेर आइरहेका छन्। जस्तोजस्तो परिस्थिति आउँछ, हामी त्योसित लड्दैलड्दै अघि बढ्नेछौं।’